Griezmann oo ug dambeyn qirtay sida uu u adkaa go’aankii uu ku diiday ku biirista kooxd Barcelona – Gool FM
(Atletico) 07 Sab 2018. Antoine Griezmann ayaa ugu dambeyn qirtay sida ay u adkeyd go’aankii uu isaga diiday inuu u dhaqaaqo kooxda Barcelona, kahor inta uusan shaaca ka qaadin sababta ugu weyn ee ku qasabtay inuu diido.
Griezmann ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono Barcelona inta lagu gudi jiray koobka aduunka 2018, laakiin wuxuu ugu dambeyn go’aansaday inuu sii joogo kooxdiisa Atletico Madrid.
“Marka aad gurigaada ku heysato jacayl, ma jirto meel aad kaga dhaqaaqeyso”.
“Atletico Madrid waxay sameysay wax walba ee aan ku dareemayo wanaag, waxaa ka mid ah sameynta saxiixyo muhiim ah si loo sameeyo koox aad u wanaagsan”.
“Waa wax aad u adag inaad ku tiraahdo maya koox sida Barcelona oo kale, balse dhinaca kale waxaan ku faraxsanahay Atletico Madrid waa sida gurigeyga oo kale waxaana doonayaa inaan u sameeyo wax weyn”.